1Password, mpitantana teny miafina izay mieritreritra ao amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
1Password, mpitantana teny miafina izay mieritreritra ao amin'ny Linux
Joaquin Garcia Cobo | 19/05/2021 09:49 | fampiharana, GNU / Linux
Ireo mpampiasa Gnu / Linux dia nanana fiarovana hatrany izay tsy mbola ananan'ny mpampiasa hafa ny rafitra miasa hafa, saingy tsy mahatonga azy io ho rafitra tsy misy hadalana.
Izany no mahatonga ny fitaovana ho an'ny Gnu / Linux izay azontsika apetraka sy ampiasaina hampiasa ny angon-drakitra sy ny fitaovantsika.
Tsia, tsy hiresaka momba ilay antivirus nentim-paharazana isika fa momba karazana fitaovana tsy fantatra nefa manan-danja kokoa: mpitantana teny miafina.
Ny mpitantana teny miafina dia mamela antsika hampiasa tenimiafina azo antoka amin'ny tranokala na rindranasa nefa tsy mila atao tsianjery ny tsirairay amin'izy ireo.
Tao amin'ny DesdeLinux dia niresaka momba izany izahay na iray amin'ireo safidy ireo, saingy tato ho ato dia navoaka ny kinova miorina voalohany an'ny mpamorona tenimiafina izay mitambatra saika amin'ny fizarana Gnu / Linux. Fitaovana ity antsoina hoe 1Password izany.
1Password dia fitaovana iray eo anelanelan'ny sehatra midadasika. Midika izany fa ny mpamorona dia tsy vitan'ny hoe namorona kinova isaky ny rafitra fiasa fa koa fanitarana no natomboka ho an'ireo mpizaha tranonkala lehibe ary mifanaraka tanteraka amin'ireo rindranasa malaza indrindra eny an-tsena. Ity farany dia mamela antsika hahay hampiasa 1Password saika amin'ny fampiharana rehetra miaraka amin'ny teny miafina izay ananantsika.
1Password manana fiarovana enkripsi farany izay mahatonga azy io ho azo antoka ny mampiditra teny miafina amin'ny endriny rehetra. Izy io koa dia manana asa fanampiny roa tena mahaliana toy ny fiarovana ny phishing sy ny fiarovana ny keyloggers. Ny voalohany dia mahatonga ny fampiharana hahafantatra ilay tranonkala ary raha tranokala hosoka na phishing izy dia tsy hiditra ny teny miafina. Ny fiarovana faharoa dia mahatonga ny rafitra miasa na ny tranonkala tsy hahafantatra ny fidiran'ny litera isaky ny lakile ary noho izany dia tsy azo zahana.
Ny mpandrindra 1Password dia nanolotra fiarovana hafa ihany koa diovy ny tabilao amin'ny fomba tsy misy afaka mamantatra ny teny miafina ao amin'ny rafitra fiasa. Mety hahaliana ity fa mety hanelingelina antsika koa raha manao copie password betsaka isika. Izany dia efa miankina amin'ny fampiasana omen'ny tsirairay avy.
Mahagaga fa milaza izany aho satria tsy fahita firy ny fampiharana iray mifantoka na mampiseho ny safidiny ho an'ny Gnu / Linux fa tsy ny rafitra fandidiana hafa, ny fampiharana ho an'ny Gnu / Linux dia manana asa tsy ananan'ireo fampiharana 1Password ho an'ny sehatra hafa.
Ny iray amin'ireo fiasa fanampiny ireo dia ao fampifanarahana kernel, ao amin'ny fanaraha-maso ny teny miafina izay manampy antsika hahita raha misy mangataka tenimiafina ary raha azo antoka na tsia; fampahalalana fanampiny momba izay miditra amin'ny inona; mifanentana tanteraka amin'ireo mpitantana varavarankely ao anatiny fiasan'ny maody alina; ary, mety ho ny sarobidy indrindra, ny fampiasana ny motera fikarohana mahery miaraka amina rafitra sokajy hahafahantsika mitantana sy mikaroka ny teny miafintsika na ny mombamomba azy ireo ao anatin'ny tototry ny totozy telo fotsiny.
ny fampiharana Gnu / Linux dia manana fiasa izay tsy ananan'ny fampiharana 1Password ho an'ny sehatra hafa
1 1Password koa dia manana fatiantoka
2 Fametrahana 1Password amin'ny Gnu / Linux
1Password koa dia manana fatiantoka
Ny mpitantana ny teny miafina dia tena tsara, mety ny tsara indrindra eny an-tsena, saingy misy fatiantoka: manana vidiny isam-bolana.
Ary amin'izany dia tsy midika aho fa tsy maintsy ho afaka, manokana aho tsy mieritreritra fa ny rindrambaiko rehetra dia tokony ho afaka. SAINGY 1Password dia misy fiantraikany lockin izay tsy atolotra amin'ny tontolon'ny fiarovana. Rehefa mampiasa ny serivisy isika dia manana fotoam-pitsarana 14 andro, aorian'io fe-potoana io mila mandoa $ 2,90 isam-bolana isika. Raha tsy te handoa isika, na satria tsy te handoa na satria tsy manam-bola, dia hijanona tsy hiasa intsony ny mpitantana ary tsy hanana fidirana amin'ny teny miafina intsony isika.
Raha marina fa afaka manao kopia voafafa amin'ireto tenimiafina ireto isika, nefa azontsika atao koa ny mampiasa ny notepad ary mametaka ireo teny miafina any, tsy azo antoka.
Ary tsy manolotra antsika ny fahazoana ilay rindrambaiko sy manao fikojakojana ny tenantsika amin'ny alàlan'ny fametrahana amin'ny mpizara anay, zavatra ataon'ny mpitantana tenimiafina hafa.
Raha ampitahaintsika amin'ireo mpitantana tenimiafina hafa dia tsy dia avo loatra ny vidin'ny 1Password ary mifanaraka amin'ny programa hafa mitovy amin'izany, saingy tsy miteraka ny valin'ny lockin izany, izany hoe fiankinan-doha amin'ny programa, mampidi-doza ary mankanesa any.
Fametrahana 1Password amin'ny Gnu / Linux
Ny fametrahana 1Password amin'ny rafitra Gnu / Linux dia tena mora. Misy fonosana ho an'ny fizarana lehibe, ka raha manana fizarana izahay Miorina amin'ny Debian, mila misintona fotsiny isika ny fonosana deba ary tantano izy.
Raha, etsy ankilany, manana fizarana miorina amin'ny Fedora na Satroka Mena izay mampiasa ny rafitra fonosana rpm, satria tsy maintsy misintona isika ny fonosana rpm ary tantano izy.
Azontsika atao koa ny mametraka azy io amin'ny alalàn'ny ny snapstore, noho izany dia tsy maintsy mandeha amin'ny fidirana 1Password isika ary hametraka azy toy ny fonosana rehetra.
Ary ho an'ireo mpampiasa tranainy kokoa izay matoky ny terminal, azontsika atao amin'ny alàlan'ny terminal. Mba hanaovana izany dia manokatra ny terminal izahay ary manoratra ireto manaraka ireto:
Aorian'izay dia ampianay ny trano fitahirizana:
echo 'deb [arch = amd64 sign-by = / usr / share / keyrings / 1password-archive-keyring.gpg] https://downloads.1password.com/linux/debian/amd64 stable main' | sudo tee /etc/apt/source.list.d/1password.list
Ary farany apetrantsika amin'ny alàlan'ny baiko:
sudo apt update && sudo apt apetraka 1password
Ary raha tsy manana Fedora na Ubuntu izahay, na ireo teratany avy aminy, dia tsy mila fonosana mailaka izahay, fa marina Manjaro na Arch Linux no ampiasainay, avy eo dia tsy maintsy ataontsika izao manaraka izao:
curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | gpg --manondrana
Aorian'ny fanatanterahana ny baiko etsy ambony, dia ampidirinay ao amin'ny trano fitehirizanay ny fonosana 1Password ofisialy:
Ary manao ny fametrahana miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto izahay:
Ary raha manana olana amin'ireo isika fomba fametrahana, 1Password support manolotra antsika fomba fametrahana hafa misimisy kokoa, izany ho an'ireo mpampiasa vao haingana.
Volana maro lasa izay dia somary sahiran-tsaina tamin'ny mpitantana teny miafina aho, tsy azoko antoka ny fomba fiasan'izy ireo ary tsy dia nazava tsara momba ny fiarovana natolotr'izy ireo aho, fa hatramin'ny nanandramako azy io dia faly tamin'ity karazana rindrambaiko ity aho ary manana izany ny fitaovako lehibe. 1Password dia safidy tsara indrindra, saingy ny vokan'ny lockin vokariny dia mampiahiahy ahy be dia be ary toa tsy dia mazava loatra ny fanamboarana azy. Mety raha raikitra io olana io, 1Password lasa iray amin'ireo mpitantana teny miafina tsara indrindra ho an'ny Gnu / Linux.
Izany no antony fampiasana azy amin'ny sehatra manokana, toa tsy soso-kevitra izany. Na izany aza, eo amin'ny sehatry ny asa, izay ilana fiarovana avo lenta sy rindrambaiko tohana mihoatra ny amin'ny sehatra manokana, 1Password dia toa ny safidy tsara indrindra: ho an'ny fanohanana atolotray azy sy ny hafainganana nomeny ny fampiasana ny rafitra fiarovana dia tsy mahatonga antsika tsy hamokatra firy.
Na ahoana na ahoana, raha mitady rindrambaiko mitovy amin'izany ianao, ny tolo-kevitro tsara indrindra dia izany ampidininao ny andrana 14 andro ary andramo izany amin'ny tranokala tsy manandanja sy amin'ny tenimiafinao manokana izay tadidinao, ampiasao betsaka araka izay azonao atao izany ary diniho raha tena mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ny 1Password na tsia. Nanao izany aho ary voavaha haingana ny fikarohako.
Loharano sy sary .- Blog 1Password
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » 1Password, mpitantana teny miafina izay mieritreritra ao amin'ny Linux
Tsy matoky mpandrindra tenimiafina ao anaty rahona aho. Na ny 1Password, na i Bitwaden, na i LastPass… izay nanana olana aho… Na ho ela na ho haingana dia hiafara amin'ny fandikan-dalàna izy ireo, na dia tsy manana "zava-dehibe" hotehirizina aza aho.
Tsy matoky an'i Mozilla na i Google amin'ny mpizaha azy koa aho ... Ny ahy dia KeepassXC eo an-toerana, ary ambonin'izany rehetra izany, modely ho ahy manokana. Tsy mila mpitantana manana lamina mihitsy aho.
Salama, izaho koa dia tsy nanana ahiahy momba ny mpitantana teny miafina, fa rehefa nanandrana ny kinova farany tiako be izy ireo ary heveriko fa tsy mamorona fanitsakitsahana fiarovana na dia miaraka aminao aza aho fa mampidi-doza ny rahona, ny safidy tsara indrindra dia ny manana izany ao amin'ny mpizara anao na amin'ny solosaina iray ihany, tsy misy isalasalana.
Misaotra betsaka anao naneho hevitra 🙂
Med dia hoy izy:
Mampalahelo fa tsia. Tena mety ho an'ny mpitantana teny miafina ny mampiasa mpizara ho an'ny fampiasa sasany nefa tsy matoky azy.
Mamaly an'i Med
Ny Android 12 beta dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Mpitantana tenimiafina: iza amin'ireo no misy amin'ny GNU / Linux?